myanmar font problem - MYSTERY ZILLION
Myanmar font က frozen zawgyi pro ပါ
္﻿့ိလ that is happen. How am i do? I can write mya font at some webs but not at the others.
Help me please.Thank!
MZ မှာက unicode သုံးထားပြီးတော့ အခြားမှာက zawgyi သုံးထားလို့ပါ။ Unicode သုံးထားတဲ့ website တွေမှာ ဇော်ဂျီ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
Thanked by 1 prettygirl111
MZ မှာက unicode သုံးထားပြီးတော့ အခြားမှာက zawgyi သုံးထားလို့ပါ။ Unicode သုံးထားတဲ့ website တွေမှာ ဇော်ဂျီ အလုပ်မလုပ်ပါi
I can read or type mya font at MZ web. Are the frozen zawgyi pro and zawgyi one the same? I want to use myanmar network website.
This website must be used zawgyi one with sansung tab27.0. thanks.
MZ မှာ Unicode Font တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MON3 Anonta 1 ကို font embed လုပ်ထားတဲ့ အတွက် ဘယ်ကနေ မဆို ကြည့်လို့ရပါတယ်။ font ရှိသည် ဖြစ်စေ မရှိ သည် ဖြစ်စေ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Myanmar network website ကတော့ ဇော်ဂျီသုံးထားပါတယ်။ samsung tab27.0 မှာ root လုပ်ပြီးတော့ zawgyi font သွင်းထားမှသာ ဖတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ website မှာ font ကို embed မလုပ်ထားသည့် အတွက်ကြောင့်ပါ။